ဒီလင့်တွေကနေ ဝဘ်တွေကိုတဆင့်သွား ဆယ်စက္ကန့် facebook လိုမျိုး အပေါ်အောက် လျှောက်ဖတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
တအားကို မှောင်မည်းနေတဲ့ လမိုက်ညတစ်ညရဲ့ သန်းခေါင်ယံအချိန်၊ ခြံကျယ်ကြီးတစ်ခြံထဲက နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးရဲ့ အပေါ်ထပ်မှာ လူ ၃ ယောက် အိပ်နေကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ အောက်ထပ်ကနေ ကျွီ ဆိုပြီး တံခါးပွင့်လာတဲ့ အသံကို သူတို့ ၃ ယောက်လုံး ပြိုင်တူကြားလိုက်ကြရတယ်။ သရဲ သိပ်ကြောက်တဲ့သူက သရဲ သရဲ သရဲ ဆိုပြီး အော်ဟစ်လို့ ခေါင်းမြီးခြုံနေလိုက်သတဲ့။ သရဲကို မယုံ၊ ဒါ သူခိုးဝင်တာပဲ ဖြစ်ရမယ်လို့ ထင်တဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ တွေ့တဲ့ပစ္စည်း ကောက်ကိုင်ပြီး အောက်ထပ်ကို ဆင်းချသွားလေရဲ့။ သရဲလည်း မသိ၊ သူခိုးလည်း ဂရုမစိုက်တဲ့ နောက်ဆုံး တစ်ယောက်ကတော့ တုတ်တုတ်မျှမလှုပ်၊ ဆက်အိပ်နေလိုက်တယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ရင် ကျွီ ဆိုတဲ့ အသံလေးက လှုံ့ဆော်လိုက်တာချင်းတော့ တူတယ်၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ခံယူချက်ပေါ်မူတည်ပြီး သူတို့ရဲ့ တုံ့ပြန်ပုံကွာသွားတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
စာသင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆရာ၊ ဆုံးမလိုက်တဲ့ ဆရာကတော့ အတူတူပါပဲ၊ ဒီစကားတွေပဲ ပြောပြလိုက်တာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ခံယူချက်ချင်း မတူကြတော့ တချို့က ဆရာထက်တောင် တော်သွားကြတယ်၊ တချို့ကတော့ သိပ်ညံ့တဲ့ တပည့်တွေ ဖြစ်သွားကြတယ်။
အခက်အခဲ ဆိုတာ စိတ်ညစ်စရာအဖြစ် ဝေးဝေးက ရှောင်ချင်တဲ့သူက အသက်ကြီးလို့သာ လူကြီးဖြစ်သွားရုံ ရှိနေချိန်မှာ အခက်အခဲတွေ စိန်ခေါ်မှုတွေဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့တိမ်မြုပ်နေတဲ့ အရည်အသွေးတွေ ပေါ်လာဖို့အတွက် အခွင့်အလမ်းပဲ လို့ ခံယူပြီး တက်တက်ကြွကြွ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားလိုက်တဲ့သူက ဘဝမှာ အများလေးစားရသူအဖြစ် အောင်မြင်လာတယ်။
ဆင်းရဲကြပ်တည်းတဲ့ မိသားစုက ပေါက်ဖွားလာတာချင်း တူပေမဲ့ တစ်ယောက်က ဒါကို စိတ်ညစ်စရာလို့ မြင်ပြီး စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးရင်းနဲ့ လူဆိုးလူမိုက်စာရင်းဝင် ဖြစ်သွားတယ်၊ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ငါ ဒီအခြေအနေအဆိုးကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ ပညာမှတစ်ပါး တခြားလမ်းမရှိဘူးလို့ ခံယူပြီး ကြိုးစားလိုက်တာ ပါမောက္ခကြီးတွေ ပညာတတ်ကြီးတွေ သူဌေးကြီးတွေ ဖြစ်လာကြတယ်။
တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေကို ရွေးချယ်လို့ မရပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ ရွေးချယ်လို့ ရတာက အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေ အကြောင်းအရာတွေကို ဘယ်လိုခံယူချက်မျိုး ထားပြီး တုံ့ပြန်မလဲ ဆိုတာပါပဲ။
အားလုံးလည်း သိကြပြီသားပါ၊ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး (IQ) မြင့်ဖို့ထက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (EQ) ကောင်းဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ ဇောင်းပေးပြောလာကြပါတယ်။ တကယ်လည်း အောင်မြင်သူတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် အဲဒီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေးက အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကကျနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး ( ၅ )ခု ရှိပါတယ်။
၁။ မိမိကိုယ်ကို သိခြင်း (Self-awareness)
လူဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်မမြင်တတ်ပါဘူး၊ ကိစ္စတစ်ခု ဖြစ်လာတိုင်း ကိုယ်သာမှန်တယ် ဆိုတဲ့ အတ္တမျိုး ရှိတတ်ကြပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေးမှာတော့ အဲဒီအတ္တဟာ တကယ့်အတားအဆီးပါပဲ။
မြန်မာစကားပုံတစ်ခု ရှိပါတယ်၊ မရှိတာထက် မသိတာခက် ဆိုတာပါ။ တချို့ ငယ်ငယ်က သိပ်ချမ်းသာကြတယ်၊ သုံးချင်တာသုံး မိဘက ခွင့်ပြုထားတယ်။ မိဘတွေ စီးပွါးကျလာတဲ့အချိန် ရောက်နေပေမဲ့လည်း အရင်အတိုင်း ငွေတွေ ဆက်သုံးနေကြတုန်းပဲ။ အထည်ကြီးပျက်လို့ ခေါ်ရမယ် ထင်တယ်။ တကယ်တော့ စီးပွါးပျက်သွားတာ ပြဿနာမဟုတ်ဘူး၊ ကိုယ့်အခြေအနေတောင် ကိုယ်မသိဘဲ အရင်လို အသုုံးအဖြုန်းကြီး အလုပ်မလုပ် အခန့်သား ထိုင်နေသေးတာကမှ တကယ့်ပြဿနာပါ။
မိမိကိုယ်ကို သိခြင်း ဆိုတဲ့အထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို သိရှိခြင်းဆိုတာလည်း အကြုံးဝင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမနေတဲ့သူ တစ်ယောက်ဟာ အလုပ်အကိုင် ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဒုက္ခရောက်တတ်သလို၊ ကိုယ့်ကုယိ်ကိုယ် ဘာလိုအပ်နေမှန်းမသိတော့ တိုးတက်ဖို့ လမ်းစနဲ့လည်း ဝေးဝေးသွားတတ်ပါတယ်။
၂။ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း (Self-regulation)
အောင်မြင်မှုဆိုတာ မတော်တဆ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ရလာတယ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ စနစ်တကျ လေ့ကျင့် တည်ဆောက်ယူရပါတယ်။ ခပ်ငယ်ငယ်မှာ အိပ်ချင်တာ၊ ပျော်ချင်ပါးချင် လည်ချင်ပတ်ချင်တာတွေကို ချုပ်ထိန်းပြီး ဖတ်ရ မှတ်ရ လေ့လာရပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲ ရောက်လာတော့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပီသအောင် နေထိုင်ရပြန်ပါတယ်။ အဆိုတော်တစ်ယောက်ဟာ အသံကို ဂရုစိုက်ရတယ်။ အိပ်ရေးပျက်ခံလို့ မရဘူး။ စားချင်ရာ လျှောက်စားလို့မဖြစ်ဘူး။ ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း လေ့ကျင့်နေရတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အောင် စားရသောက်ရ နေရထိုင်ရတယ်။ ပိုက်ဆံ မရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာ အသစ်အဆန်း လိုချင်တာ၊ သုံးချင်စွဲချင်တာတွေကို ချူပ်တည်းရသလို၊ ပိုက်ဆံတွေ ရလာချိန်မှာ ဒီငွေတွေ ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပြန်မပေးနိုင်အောင် အပျော်အပါးနောက် မလိုက်မိအောင် ထိန်းချုပ်ရပြန်ပါသေးတယ်။ ကိုယ့်ကုယိ်ကိုယ် ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း မရှိတဲ့သူဟာ ဘဝမှာ အောင်မြင်လည်း ခဏပါပဲ။
၃။ စိတ်ဓါတ်တက်ကြွခြင်း (Motivation)
Motivation = A passion to work for the reasons that go beyond money and status
အကြိုက်ဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပါ။ အဝေးပြေးကားတွေကို ညဘက်ဆို ရဲတွေ စစ်ဆေးလေ့ရှိကြတယ်၊ မှောင်ခိုပစ္စည်းတွေ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ပါမပါပေါ့။ ဘာတွေ လာရှာနေတုန်း လို့ ရဲနှစ်ယောက်ကို မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ “ဒီလိုပါပဲ၊ အထက်က လုပ်ခိုင်းလို့ လုပ်နေရတာ၊ ဓါတ်မီးနဲ့ ဟိုထိုး ဒီထိုးပေါ့” လို့ဖြေတဲ့ ရဲနဲ့ “ကျွန်တော်တို့အလုပ်က သိပ်ကိုအရေးပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့သာ တခုခုမှားယွင်းသွားရင် တိုင်းပြည်အတွက် အခွန်တွေ နစ်နာမယ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုလည်း လူငယ်တွေအတွက် သိပ်ကို အန္တရာယ်များတယ်” လို့ဖြေတဲ့ ရဲ၊ အဲဒီနှစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်း နဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် (Performance) ဟာ တခြားစီ ဖြစ်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။ အလုပ်ကို ပေါ့ပေါ့လေးပဲ ခံယူထားရင် ပေါ့ပေါ့လေးပဲ လုပ်မှာပါ၊ ဒီတော့ ပေါ့ပေါ့လေးပဲ အောင်မြင်မှာပေါ့။ လူတစ်ယောက် သူ့အလုပ်မှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးဟာ ဘာလဲဆိုရင် သူ့အလုပ်ကိုသူ ဘယ်လိုသဘောထားလဲ ဆိုတာပါပဲ။
၄။ လူမှုဆက်ဆံရေး (Social skill)
ခေါင်းဆောင်မှု စွမ်းရည်၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်နိုင်စွမ်း၊ အသင်းအဖွဲ့ စိတ်ဓါတ်၊ ဒါတွေအကုန်ပါဝင်ပါတယ်။ လူမှုဆက်ဆံရေး လို့ပြောလိုက်ရင် လူတွေက စကားပြောကောင်းတာကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကြတယ်။ လိုအပ်တာတော့ မှန်ပေမဲ့၊ ခိုင်မြဲပြီး အပြန်အလှန် အကျိုးပြုတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် အဲဒါထက် ပိုအရေးကြီးတာက ခံယူ ချက်ပါ။ ကျွန်တော်သောက်ထားတဲ့ ပိုက်ကို နောက်တစ်ယောက်က အအေးယူသောက်တဲ့အခါ ဖယ်ပစ်လိုက်လို့ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ HIV ပိုးရှိသူ တစ်ယောက်ကိုသာ ဒီလိုပြုမူမိလိုက်ရင်တော့ အကြီးအကျယ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ ငါက ဒီလိုပိုးရှိနေလို့ သူဒီလိုလုပ်တာ ဆိုပြီး ထင်မြင်ယူဆသွားလို့ပါ။
လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ တချို့ဟာ ရုပ်ရည်မရှိလို့၊ လူကောင်သေးလို့၊ အသက်ငယ်လို့ အတွေ့အကြုံ မရှိလို့ စသဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အငုံ့စိတ် (Inferiority complex) ဝင်နေတဲ့အခါ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရ အဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ သူများအတွက် သာမန်လို့ထင်ရတဲ့ ကိစ္စလေးတွေက သူ့အတွက်တော့ ငါ့မို့လို့ လုပ်တာ၊ ငါ့ကို စော်ကားတာ၊ ငါ့ကို ပညာပြတာ စသဖြင့် ထင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်။
အဲဒီနောက်တော့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆက်ဆံရအဆင်မပြေတော့ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် လေးစားမှုရှိရဲ့လား ယုံကြည်မှုရှိရဲ့လား ဆိုတာအပြင် တခြားလူတွေအပေါ်မှာ တခြားလူတွေရဲ့ အလုပ်တွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုသဘောထားလဲ ဆိုတာကပါ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ သိပ်အရေးပါပါတယ်။
၅။ ကိုယ်ချင်းစာတရား (Empathy)
ကျွန်တော် NGO မှာ အလုပ်စဝင်တော့ ကျွန်တော်နဲ့အတူ အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေဆီက လစာတိုးပေးဖို့ အကြောင်း ကြားရတဲ့အခါတိုင်း သိပ်စိတ်ပျက်ဖူးတယ်၊ ဒီအလုပ်လုပ်တာ ဘယ့်နှယ့်လစာကို အဓိက ထားရတာလဲ၊ ပရဟိတစိတ်ကို အရင်းခံရမှာပေါ့ လို့တွေးဖူးခဲ့တယ်။ ကိုယ်ကတော့ ပြောနိုင်တာပေါ့၊ ကိုယ့်ကို မှီခိုစားသောက်နေတဲ့သူဆိုတာမှ မရှိဘဲကိုး။ ကိုယ်ရတာ ကိုယ်သုံးရုံပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ကျတော့ အဲလို ဟုတ်မနေဘူး။
အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ သူတို့အိမ်တွေ ရောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါ အဖေက အိပ်ရာထဲ လဲနေတာ၊ အမေဖြစ်သူက အဖေ့ကို ပြုစုရင်း ကလေးအငယ်လေးတွေကို စောင့်ရှောက်နေရတာတွေ မြင်ရတော့မှ သူများဘက်က တွေးမကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ့်ကုယိ်ကိုယ် သိပ်စိတ်ပျက်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနေ့ဟာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို တစ်ဆင့်တက်စေခဲ့တဲ့ နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ လူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်း ပိုအဆင်ပြေလာတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တာတစ်ခုတည်း သိတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ တစ်ဖက်မှာ ရှိနေနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေကိုပါ နားလည်ပေးတတ်လာတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဟာ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းဖို့အတွက် အသက်သွေးကြောဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ အောင်မြင်မှုတစ်ခုရဲ့ ၁၀%ကသာ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ကောင်းမွန်မှုကြောင့် ဖြစ်ပြီး ကျန် ၉၀% ကတော့ စိတ်ဓါတ်အရည်အသွေးအပါအဝင် တခြားသော အကြောင်းအရာတွေကြောင့်လို့ စိတ်ပညာရှင်တွေက လက်ခံထားကြပါတယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကနေ ဘွဲ့ရခဲ့တဲ့ သူတွေကို လုပ်ထားတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ခုမှာဆို စာမေးပွဲဝင်ခွင့်အမှတ်လို ဉာဏ်ရည်ကို တိုင်းတာထားတဲ့ ရလဒ်တွေနဲ့ လူတွေရေဲ့ အာင်မြင်မှုဟာ လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိဘူးလို့ကို ဖော်ပြထားတာပါ။
အားနည်းနေတဲ့ စိတ်ဓါတ် (အဆိုးမြင်စိတ်) ဆိုတာဟာ ပေါက်နေတဲ့ဘီးနဲ့ တူပါတယ်၊ အဲဒီဘီးကို အသစ်မလဲမချင်း ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ နေရာကို ဘယ်တော့မှ ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝမှာ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ဓါတ်အရည်အသွေး (Emotional quotient) အားကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။
Chu Zim December 15, 2021 at 9:12 PM
Admin စာတွေကိုဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ 😁
San Zuren December 15, 2021 at 10:35 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 3:08 AM
ကိုယ်တွေက commentတွေ ဟိုကနေ ဒီရွှေ့ 😂
Unknown January 8, 2022 at 7:15 AM
ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ Comment တွေကြ မပေါ်ဘူးဗျာ ဘာဖြစ်လို့လဲ မသိဘူး?
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 8, 2022 at 7:57 AM
Thanks January 8, 2022 at 8:22 AM
Unknown March 7, 2022 at 5:33 PM
Unknown March 7, 2022 at 10:25 PM
Unknown March 8, 2022 at 5:44 AM
Su yimon March 9, 2022 at 4:44 AM
Unknown March 9, 2022 at 4:47 AM
Zin Mar Htwe December 17, 2021 at 12:38 AM
Unknown March 7, 2022 at 6:52 AM
Aye Kyaing December 21, 2021 at 5:32 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 3:12 AM
""အားနည်းနေတဲ့ စိတ်ဓါတ် (အဆိုးမြင်စိတ်) ဆိုတာဟာ ပေါက်နေတဲ့ဘီးနဲ့ တူပါတယ်၊ အဲဒီဘီးကို အသစ်မလဲမချင်း ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ နေရာကို ဘယ်တော့မှ ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝမှာ ကိုယ်ရည်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်သွားနိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ဓါတ်အရည်အသွေး (Emotional quotient) အားကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။""
Mg Soki January 8, 2022 at 6:57 AM
Sammi January 3, 2022 at 8:04 AM
အားနည်းနေတဲ့ စိတ်ဓါတ် (အဆိုးမြင်စိတ်) ဆိုတာဟာ ပေါက်နေတဲ့ဘီးနဲ့ တူပါတယ်၊ အဲဒီဘီးကို အသစ်မလဲမချင်း ကိုယ်ရောက်ချင်တဲ့ နေရာကို ဘယ်တော့မှ ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
EQ မြှင့်ဖို့လဲ ကြိုးစား​နေပါတယ် ဆရာ
khoon aoune January 8, 2022 at 5:06 AM
Unknown January 8, 2022 at 5:10 AM
Are wrr pay
MML January 8, 2022 at 5:10 AM
Dar Dar January 8, 2022 at 5:23 AM
Susana January 8, 2022 at 5:23 AM
Unknown January 8, 2022 at 5:26 AM
bill တစ်ထောင်လောက် ကူပေးကြပါဦးရှင်
နေ့စဉ်မပျက် click ပါတယ် အလုပ်မရှိတော့ ေဘအခက်အခဲရှိလို့ပါ
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ January 8, 2022 at 5:54 AM
zaylatt January 8, 2022 at 5:26 AM
M January 8, 2022 at 5:32 AM
Than Than January 8, 2022 at 5:40 AM
PaPaWaDe January 8, 2022 at 5:42 AM
M January 8, 2022 at 5:42 AM
For my dreams🎍,no matter what it takes,i don't care🙂.
angelkhine January 8, 2022 at 5:52 AM
Unknown January 8, 2022 at 5:56 AM
ya min htet January 8, 2022 at 5:58 AM
Unknown January 8, 2022 at 6:00 AM
Zin Mar Htwe January 8, 2022 at 6:05 AM
Wah Wah January 8, 2022 at 6:08 AM
EQ IQ ကောင်းအောင်ကြိုးစားလျက်ပါ ဆရာ💜💜
Uria27 January 8, 2022 at 6:23 AM
Ni Ni Phoenix January 8, 2022 at 6:27 AM
အလဲထိုးဆိုလို့ ထိုးခဲ့ပြီးမှ ဒိုင်က လာဆွဲရင် ဆွဲတဲ့ဒိုင်ပါ ထိုးဖို့ပဲရှိတယ်။
Unknown January 8, 2022 at 6:28 AM
ACpower January 8, 2022 at 6:34 AM
Thinzar Theint Theint Thaung January 8, 2022 at 6:37 AM
Well noted, Thanks Dr and Admin
Wu Yi Fan January 8, 2022 at 6:44 AM
Unknown January 8, 2022 at 6:46 AM
ko Thet January 8, 2022 at 6:57 AM
Unknown January 8, 2022 at 7:02 AM
Unknown January 8, 2022 at 7:17 AM
Click ရင်း ဗဟုသုတ ရတဲ့အတွက် ဒေါက်တာဖြိုးကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်... များများ ရေးနိုင်ပါစေခင်ဗျာ....
Unknown January 8, 2022 at 7:18 AM
Kyaw mae yaung January 8, 2022 at 7:20 AM
I am fa.ကျော်မဲရောင်is my fb Acc.17old😁😁😁😁
Yuppie January 8, 2022 at 7:21 AM
Thank you Dr. I love every article of you.
Myo January 8, 2022 at 7:33 AM
Htein Htein January 8, 2022 at 7:39 AM
Unknown January 8, 2022 at 7:40 AM
Thar Gyi January 8, 2022 at 7:50 AM
We click,we support and we win.
Unknown January 8, 2022 at 7:52 AM
Su Su San January 8, 2022 at 7:58 AM
Unknown January 8, 2022 at 5:45 PM
Tanzin Cho January 8, 2022 at 8:25 AM
Kyaw Nyein Chan January 8, 2022 at 8:27 AM
မအလ 🐕🐕🐕 စစ်​ခွေး​တွေက PDF ​တွေကို ဖမ်းမိရင် ဘယ်​လောက်အထိ ယုတ်မာကြသလဲလို့ ကြည့်ကြပါ
ငါတို့ အလှည့်​ရောက်ရင် မနွဲ့ကြစတမ်းဖြစ်ပါ​စေ ...
စစ်​မြေပြင်မှာ​တော့ PDF ရဲ​ဘော်​တွေက အသက်​တွေ၊ ဘဝ​တွေ ရင်းနှီး​ပေးဆပ်လို့ တိုက်ပွဲဝင်​နေကြပြီ။ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့်ရ​နေတဲ့ မြို့ပြ​တွေမှာ ​နေထိုင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြတဲ့ ကျ​နော်တို့ ပြည်သူလူထု​တွေက ​နောက်တန်းမှာ​နေပြီး ​PDF ရဲ​ဘော်​တွေအတွက် ထောက်ပို့တပ်သား​တွေအဖြစ် ကူညီနိုင်ကြတဲ့ အခွင့်အ​ရေး​တွေက အဆင်သင့် ရှိ​နေပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်မှု​အောက်က ရုန်းထွက်နိုင်ဖို့ ညီညီညွတ်​ညွတ် ပါဝင်လှုပ်ရှားကြပါစို့
1. Click2donate မှာ Click ပြီး ကူညီကြပါ
2. Latt Saung apps မှာ Click ပြီး ကူညီကြပါ
3. Tha Din apps မှာ ဝင်ပြီး ပွိုင့်​တွေ စု​ပေးကြပါ
4. End Game - Union နှင့် Play2Support ဂိမ်း​တွေ ကစားပြီး ကူညီ​ကြပါ
5. YouTube ထဲမှာ WE CLICK , WE CLICK 4MM , Raung Ni စတာ​တွေကို နကြည့်ရှု့​နားဆင်ပေးကြပါ
Unknown January 8, 2022 at 8:29 AM
Unknown January 8, 2022 at 8:34 AM
TT January 8, 2022 at 8:42 AM
အခု​တော့ အ​ဖြေရှာတယ် ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတယ်
Unknown January 8, 2022 at 8:46 AM
ZawZawHtet January 8, 2022 at 8:56 AM
khinswehnin7 January 8, 2022 at 9:43 AM
TZO January 8, 2022 at 9:48 AM
ArrD January 8, 2022 at 11:11 AM
Zon Thuya Aung January 8, 2022 at 2:16 PM
Lady Su January 8, 2022 at 3:04 PM
BBMOE January 8, 2022 at 3:57 PM
Unknown January 8, 2022 at 5:42 PM
Unknown January 8, 2022 at 6:02 PM
Zin Ko Lwin January 8, 2022 at 6:04 PM
Su yimon January 8, 2022 at 6:41 PM
အခုလိုစာပေ ကိုဖတ်ရတာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်
Justic Shine January 8, 2022 at 6:50 PM
Mya Mya Lynn January 8, 2022 at 9:46 PM
Naing ko January 8, 2022 at 10:08 PM
TZO January 8, 2022 at 10:32 PM
Against the military coup as much as we can. The end is going to be coming soon.
Natural Myanmar January 8, 2022 at 10:52 PM
Myint Zu Thin January 8, 2022 at 11:47 PM
Daw Su Su Htway January 8, 2022 at 11:59 PM
Unknown January 9, 2022 at 1:16 AM
Freya Phyo January 9, 2022 at 1:26 AM
Unknown January 9, 2022 at 3:23 AM
ကောင်းလိုက်တဲ့ စာစောင်ပါ ဆရာရယ် ကျေးဇူးပါ
ISSHAN January 9, 2022 at 6:19 AM
Unknown January 9, 2022 at 6:31 AM
Kyaw1972 January 9, 2022 at 6:42 AM
Kyaw mae yaung January 9, 2022 at 7:42 AM
I am fa😁😁.ကျော်မဲရောင်is my fb acc. 17old.
Dr.Win Htun January 9, 2022 at 9:13 PM
Unknown January 10, 2022 at 12:07 AM
Unknown January 10, 2022 at 12:09 AM
naung naung January 13, 2022 at 4:05 AM
naung naung January 13, 2022 at 4:06 AM
ဖြေပေးကြပါအုံးခင်မျ လိုင်းမကောင်းတဲ့ကြားက ကလစ်နေရလို့ပါခင်မျ
Unknown January 14, 2022 at 6:01 AM
Bumblebee January 14, 2022 at 8:14 AM
Unknown January 24, 2022 at 2:49 AM
aungthurahtun January 26, 2022 at 3:40 AM
Thaw Lin February 7, 2022 at 2:37 AM
Fighting guys (Daily Click$)
mon. star. 7797 March 7, 2022 at 4:58 AM
Unknown March 7, 2022 at 4:59 AM
ငင့် အက်ဒ်မင်က လင့်တွေကိုအဲ့လိုပေးတော့ မသိတဲ့သူတွေက လင့်လို့မထင်ပဲမနှိပ်ပဲကျော်သွားရင်ရော?
Unknown March 7, 2022 at 5:01 AM
New tab နဲ့ဖွင့်ပေးပါလားအက်ဒ်မင်ရယ်. တလင့်နှိပ်ပြီးတခါ ပြန်ဝင်နေရတယ်.
PMN March 7, 2022 at 5:06 AM
Unknown March 7, 2022 at 5:43 AM
Unknown March 7, 2022 at 5:44 AM
Chit Myant Noe Khin March 7, 2022 at 5:52 AM
Unknown March 7, 2022 at 6:00 AM
Unknown March 7, 2022 at 6:04 AM
C2D, Thadin, Doh Khit
u winn March 7, 2022 at 6:07 AM
u winn March 7, 2022 at 6:10 AM
dawsawhla March 7, 2022 at 6:17 AM
Demo March 7, 2022 at 6:28 AM
WIM March 7, 2022 at 6:36 AM
Unknown March 7, 2022 at 6:44 AM
Tu Tu's Daddy March 7, 2022 at 6:47 AM
Qlik to Done
Back kham March 7, 2022 at 7:01 AM
Tagyi March 7, 2022 at 7:01 AM
Bogyoke Hmugyi Maaloe March 7, 2022 at 7:01 AM
Take Care All.....💪💪💪
Sweet March 7, 2022 at 7:12 AM
Unknown March 7, 2022 at 7:15 AM
Hein Htet Naung March 7, 2022 at 7:16 AM
Unknown March 7, 2022 at 7:26 AM
ဝဿန် March 7, 2022 at 7:32 AM
ငါတို့ ငါတို့တွေ နိုင်ကိုနိုင်ရမည်
Unknown March 7, 2022 at 7:43 AM
Unknown March 7, 2022 at 7:46 AM
Yoe yar March 7, 2022 at 7:46 AM
25 4532 3776 3820 4992
Unknown March 7, 2022 at 8:05 AM
Ko nyi March 7, 2022 at 8:33 AM
Su linn Myat March 7, 2022 at 8:36 AM
Ko nyi March 7, 2022 at 8:41 AM
Khine NwayOo March 7, 2022 at 9:00 AM
Boseintun March 7, 2022 at 9:27 AM
မြူမူန်လေးလောက်ဘဲဖြစ်ဖြစ် အား တစ်ခုအ‌ေနနဲ့ ပါ၀င်ကလစ်နေဆဲ
Unknown March 7, 2022 at 5:55 PM
Thet Oo March 7, 2022 at 5:55 PM
HMHtun March 7, 2022 at 6:15 PM
Phone Naing March 7, 2022 at 6:41 PM
ဖေ့ဘွက် မှာ အချိန်ဖြုန်း မယ့်အစား
Mmtm March 7, 2022 at 6:52 PM
Akm March 7, 2022 at 7:03 PM
မွေထီး မအလ မြွေမ ကကလ အာ့အာ့
Jun Jun March 7, 2022 at 8:41 PM
Pretty nice 🥰
Boseintun March 7, 2022 at 9:46 PM
Khoon March 7, 2022 at 10:05 PM
Chit Myant Noe Khin March 7, 2022 at 10:29 PM
💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿 အစစအရာရာ ဂရုစိုက်ကြပါ PDF များတို့
Unknown March 7, 2022 at 10:43 PM
u winn March 7, 2022 at 11:02 PM
Ba soee March 7, 2022 at 11:02 PM
Su linn Myat March 7, 2022 at 11:05 PM
Fighting Clickers 💪
We must win 👍
Shwe Nyaung March 7, 2022 at 11:33 PM
8/3/2022 14:01 done
ဖုန်းဒေတာ သို့မဟုတ် ေဘလေး အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်....09 965371989..
Shwe Nyaung March 7, 2022 at 11:41 PM
Click နိူင်ရေးအတွက် ဖုန်းဘေဖြည့်သွင်းပေးပါသော Clicker အားအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်...
Unknown March 7, 2022 at 11:44 PM
Lwan Coffee March 7, 2022 at 11:55 PM
Unknown March 8, 2022 at 12:02 AM
Unknown March 8, 2022 at 12:03 AM
zaw naing March 8, 2022 at 12:09 AM
I am clicker!!
Thy will be done !!!
Unknown March 8, 2022 at 12:19 AM
Unknown March 8, 2022 at 12:25 AM
မျက်နှာချင်းဆိုင်ကမနက်ကသကြ်န်သီးချင်းတွေအကျယ်ကြီးဖွင့်ပြီးပျော်​ေနေကြတာ လူယုတ်မာအားပေးတွေ လူယုတ်ချင်းမို့ထောက်ခံကြတာ စိတ်တိုတိုနဲ့မီးလာတာနဲ့clickနေတာ
Myo March 8, 2022 at 12:32 AM
nway oo tin March 8, 2022 at 12:35 AM
Unknown March 8, 2022 at 12:35 AM
Zin Mar Htwe March 8, 2022 at 1:01 AM
Yoe yar March 8, 2022 at 1:39 AM
3094 4606 2088 3683
ရတဲ့သူ reply မှာ comment လေးရေးပေးခဲ့ပါ
နွေဦး March 8, 2022 at 1:44 AM
Unknown March 8, 2022 at 1:40 AM
Phone Naing March 8, 2022 at 1:43 AM
Unknown March 8, 2022 at 1:57 AM
Unknown March 8, 2022 at 2:32 AM
Unknown March 8, 2022 at 2:40 AM
ကြော်ညာကအဆုံးထိကြည့်ရမှာလား click to donate ကအဆုံးထိမကြည့်ရင်ကြော်ညာမတတ်ဘူး
Tun Linn Myat March 8, 2022 at 3:27 AM
AMMO March 8, 2022 at 3:27 AM
အကျိုးရှိအောင် ဘယ်နိုင်ငံမဆို VPN US ထားပွီးကလစ်ကြပါ (USမှာနေသူများမပါ)
Cool! March 8, 2022 at 3:36 AM
Unknown March 8, 2022 at 3:40 AM
Unknown March 8, 2022 at 4:21 AM
Unknown March 8, 2022 at 5:11 AM
Click ​နေရင်းစာဖတ်ရတာ အရမ်းအဆင်​ပြေပါတယ် အချိန်မပြည့်မှာစိတ်မပူရ
ဗဟုသုတလည်းရ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားလည်း ဖြစ်​စေတဲ့အတွက် အရမ်​​ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ
Su linn Myat March 8, 2022 at 5:23 AM
Unknown March 8, 2022 at 6:00 AM
Aye Aye Than March 8, 2022 at 6:04 AM
Unknown March 8, 2022 at 6:17 AM
ကိုလေး March 8, 2022 at 6:47 AM
Thanks all clicker
frequency March 8, 2022 at 8:48 AM
Boseintun March 8, 2022 at 8:58 AM
Panlay March 8, 2022 at 9:06 AM
Paul March 8, 2022 at 10:15 AM
kiki March 8, 2022 at 6:05 PM
naykayan nayminthar March 8, 2022 at 7:48 PM
Unknown March 8, 2022 at 8:01 PM
ဒီစာကို ဆရာရဲ့ FB Page & Acc မှာရော
ကျနော် ဆရာ့ရဲ့ ဒီစာရှည်ကို
Slect All လုပ် Copy ယူ Credit ပေးပြီး
Note Pad ထဲမှာ ထည့်မှတ်ထားချင်လို့ပါနော်
mon. star. 7797 March 9, 2022 at 4:01 AM
Unknown March 9, 2022 at 4:23 AM
Tun Linn Myat March 9, 2022 at 4:30 AM
ဖုန်းဘေ လိုအပ်သူများ ပြောပါ
Unknown March 9, 2022 at 4:32 AM
Unknown March 9, 2022 at 4:35 AM
Unknown March 9, 2022 at 4:45 AM
Unknown March 9, 2022 at 5:03 AM
Be healthy clickers
Unknown March 9, 2022 at 5:34 AM
D Yan March 9, 2022 at 5:36 AM
Unknown March 9, 2022 at 5:37 AM
Su linn Myat March 9, 2022 at 5:54 AM
Thanks to all clickers